Cape Town enweghị mmiri n'ihi ụkọ mmiri | Netwọk Mgbasa Ozi
Oké ọkọchị ahụ sitere na mmetụta nke mgbanwe ihu igwe na-akpata nke ahụ, Cape Town, Obodo nke abụọ kachasị ukwuu na South Africa na obi ndị njem nleta nke mba ahụ, na-agụta na mmiri agwụla.
Ọ bụrụ na ndị njem nleta na ndị bi na Cape Town anaghị belata oke oriri ha, mmiri ga-agwụ n'obodo ahụ site na Eprel 12. Ọ bụ ya bụ obodo mbụ nke oge a na-agwụcha mmiri. Olee ihe i bu n'obi ime banyere ọnọdụ a?
1 Zerobọchị efu
2 Cape Town na-enweghị mmiri
Calledbọchị nke Eprel 12, 2018 ka akpọrọ "Day Zero." Nke ahụ bụ ụbọchị ebe, ọ bụrụ na agbanweghị omume oriri nke ndị bi na ya na ndị njem, obodo ga-agwụ mmiri. Cape Town dị na ikike 13,5% ma nye ọnọdụ oke ụkọ mmiri na mmụba mmiri na-arịwanye elu nke okpomọkụ dị elu kpatara, njedebe mmiri dị nso.
Ọ bụrụ na oriri erughị ala, a ga-amanye obodo ịkwụsị nkesa mmiri ya. N'agbanyeghị mgbalị ndị ahụ, oge a kara aka ruo Day Zero ọ bụghị nanị na ọ ga-abụrịrị ihe karịrị iyi egwu, mana ọ na-adị mkpumkpu.
Uzo nke ndi ochichi no na mpaghara a bido iji buso nsogbu nke unwu ala bu na ndi umu amaala na eri nke kachasị nke 50 lita kwa onye kwa ụbọchị. Nke a bụ oke mbelata, na-eburu n'uche na ịsa ahụ nke 5 nkeji na-eji ihe ruru 100 lita mmiri, dị ka WHO si kwuo.
Oké ọkọchị nke metụtara mpaghara ahụ bụ ihe ọhụụ ebe ọ bụ na ọ bụghị naanị na-esite na enweghị mmiri ozuzo nke gosipụtara oge mmiri ozuzo ikpeazụ (Eprel-Ọktoba), kamakwa site n'eziokwu ahụ bụ na oke mmiri ozuzo dị ala karịa afọ abụọ gara aga.
Cape Town na-enweghị mmiri
Amụma ihu igwe anaghị akpọsa oke mmiri ozuzo rue Eprel. Ndị ọchịchị nwere olileanya na mmiri ozuzo a ga-abịarute n'oge mbụ wee meghee ọnụ ụzọ ndị njem, n'agbanyeghị na oge njem njem dị elu dabara na ọnwa kacha njọ n'afọ.
Naanị afọ abụọ gara aga, obodo jiri mmiri mmiri ruru ijeri lita otu ijeri. Dị ka ọ dị taa, e belatala oriri ahụ na ọkara. Dabere na Tim Harris, onye isi nchịkwa nke Agencylọ Ọrụ Na-ahụ Maka Njem Nleta nke Njem Nleta, Azụmaahịa na Ntinye ego, oke ihe egwu a na-eme naanị otu puku afọ ọ bụla, ya mere, a na-emezigharị ha na mmiri.
Ọ bụ ezie na oké ọkọchị ahụ dakwasịrị obodo ahụ, oge ndị njem nleta adịla mma. Harris achọpụtala na ọbụlagodi na ụbọchị efu abịarute ma ọkpọ mmiri kwụsị ịrụ ọrụ na ebe obibi, ụlọ oriri na ọ hotelsụ willụ ga-eso n'etiti azụmaahịa ndị ọrụ ha ga-emesi obi ike.
Na ihe ka mma, anyị ahụwo nzaghachi di egwu site na ndi njem nleta na ichekwa mmiri. Ha ejiriwo ịnụ ọkụ n'obi sonye na mbọ ahụ, ha achọpụtala na ha nwere ike ịbụ akụkụ nke azịza ahụ site na isonyere mmụọ nke Cape Town, "Harris kwusiri ike.
Site na nde 25.637 (ihe dị ka nde euro 20.615) nke mpaghara ahụ banyere site na mpaghara a na 2016 (dịka mbipụta 2017 nke akụkọ "UNWTO Panorama of International Tourism"), 7.910 nde (ihe dị ka nde euro 6.360) gbakwunyere site na South Africa (30,85%).
Njem nleta na Cape Town na-aghọwanye ihe na-ewu ewu. Na 2017, Ndị njem nleta nde 1,3 gara obodo ahụ. Ekwesiri ikwuputa na unwu ala na-emetụta akuku nke Western Cape. E nwere ọtụtụ ebe mmiri juru.
Dị ka ị pụrụ ịhụ, oké ọkọchị ahụ na-akpa ọtụtụ ebe gburugburu ụwa aka, ọ ga-abụrịrị ọdachi kachasị njọ. Ngwọta dịka ibelata mmiri oriri na-egbochi naanị ebe ọ bụ na, ọ bụrụ na mmiri ezughi oke, ọ bụ oge tupu mmiri gafee. Ya mere, imepụta atumatu na-enyere aka ijikwa mmiri dị ezigbo mkpa.
Pathzọ zuru ezu na edemede: Netwọk Mgbasa Ozi » Ihe gbasara ihu igwe » Oké ọkọchị » Cape Town enweghị mmiri n'ihi ụkọ mmiri ozuzo
Anụmanụ na nnụnụ ga-aka eme mgbanwe maka mgbanwe ihu igwe
Kedu ka igwe ojii cirrus si arụ ọrụ na gịnị ka ha na-ebu amụma ya?